HomeKnowledgeသငျ့ခဈြသူနဲ့ ရုံးတခုတညျးမှာ အလုပျအတူတူလုပျတဲ့အခါ သိထားသငျ့တဲ့အခကျြ (၅) ခု
သငျ့ခဈြသူနဲ့ ရုံးတခုတညျးမှာ အလုပျအတူတူ လုပျရတာ တဈခါတလေ ပြျောစရာ မကောငျးပါဘူး။ ဘာ့ကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ အလုပျနဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာ ခှဲခွားဖို့ ခကျခဲလို့ပါ။ အလုပျတူတာကွောငျ့ စိုးရိမျပူပနျတာတှေ၊ ဒေါသထှကျတာတှေ ဖွဈတတျပွီး တဈခါတလမှော လမျးခှဲရတာတောငျ ဖွဈတတျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သငျ့ခဈြသူနဲ့ အလုပျတဈခုထဲမှာ အတူတူလုပျရငျ အဆိုးမွငျတဲ့ အတှေးတှေ ဖြောကျထားလိုကျပါ။
ခပျခှာခှာနပေါ ဆိုတာက ကိုယျရေးကိုယျတာနဲ့ အလုပျခြိနျကို ခှာထားပါလို့ ပွောတာပါ။ အလုပျတှေ အရမျးရှုပျနတေဲ့အခြိနျမှာ တဈယောကျကို တဈယောကျ အရူးအမူး ခဈြပွနလေို့ မဖွဈပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ အလုပျခြိနျမှာ ခပျခှာခှာနဲ့ သာမနျပဲ ဆကျဆံပါ။ အဲဒါ ပိုကောငျးပါတယျ။
2. အလုပျနဲ့ကို ယျရေးကိုယျတာကို ခှဲခွားနိုငျဖို့ ကွိုးစားပါ။
အထကျမှာ ဖျောပွထားသလိုပါပဲ။ အခဈြနဲ့ အလုပျကို ခှဲခွားနိုငျပွီဆိုရငျ ဘဝရဲ့ အခနျးကဏ်ဍတိုငျးမှာ အကြိုးရှိပွီး အောငျမွငျမှာပါ။
ရုံးတဈခုတညျးမှာ သငျ့ခဈြသူနဲ့ အလုပျအတူတူ လုပျရတာ ဘယျလောကျတောငျ ပြျောစရာကောငျးလဲနျော။ ဒါပမေယျ့ တဈခု သတိထားရမှာက အဲဒီအကွောငျးကို တဈလောကလုံး သိအောငျ ကွှားစရာ မလိုပါဘူး။ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ခဈြနဖေို့ပဲ လိုတာပါ။ နောကျကှယျမှာ ကဲ့ရဲ့တတျသူတှလေညျး ရှိပါတယျ။
4. အလုပျသဘောအရသာ ဆကျဆံပါ။
ရုံးရောကျရငျ သငျတို့နှဈယောကျဟာ သာမနျ ခငျမငျသလိုပဲ ဆကျဆံရငျ သငျ့အတှကျလညျး ကောငျးသလို သငျ့ခဈြသူအတှကျလညျး ကောငျးပါတယျ။ ပိုပွီးတော့လညျး ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစရာ ကောငျးပါတယျ။
5. လမျးခှဲဖွဈရငျတောငျ အလုပျသဘောအရ ဆကျဆံဖို့ မမပေ့ါနဲ့။
သငျတို့နှဈယောကျ လမျးခှဲလိုကျတဲ့ အခါ သူ့ကိုမုနျးနရေငျတောငျ တတျနိုငျသမြှ လူကွီးကောငျးကောငျး ဆကျဆံပွီး သဘောထားကွီး ပေးလိုကျပါ။ ဘာ့ကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ ရုံးမှာ သငျလညျး အရေးပါသလို သူလညျး အရေးပါ ပါတယျ။ ကိုယျရေးကိုယျတာ မစှကျဘဲ အလုပျသဘောအရပဲ ဆကျဆံမယျ ဆိုရငျ နှဈယောကျလုံးအတှကျ ကောငျးပါတယျ။
သင့်ချစ်သူနဲ့ ရုံးတခုတည်းမှာ အလုပ်အတူတူလုပ်တဲ့အခါ သိထားသင့်တဲ့အချက် (၅) ခု
သင့်ချစ်သူနဲ့ ရုံးတခုတည်းမှာ အလုပ်အတူတူ လုပ်ရတာ တစ်ခါတလေ ပျော်စရာ မကောင်းပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အလုပ်နဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ခွဲခြားဖို့ ခက်ခဲလို့ပါ။ အလုပ်တူတာကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်တာတွေ၊ ဒေါသထွက်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပြီး တစ်ခါတလေမှာ လမ်းခွဲရတာတောင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သင့်ချစ်သူနဲ့ အလုပ်တစ်ခုထဲမှာ အတူတူလုပ်ရင် အဆိုးမြင်တဲ့ အတွေးတွေ ဖျောက်ထားလိုက်ပါ။
ခပ်ခွာခွာနေပါ ဆိုတာက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ အလုပ်ချိန်ကို ခွာထားပါလို့ ပြောတာပါ။ အလုပ်တွေ အရမ်းရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အရူးအမူး ချစ်ပြနေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် အလုပ်ချိန်မှာ ခပ်ခွာခွာနဲ့ သာမန်ပဲ ဆက်ဆံပါ။ အဲဒါ ပိုကောင်းပါတယ်။
2. အလုပ်နဲ့ကို ယ်ရေးကိုယ်တာကို ခွဲခြားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
အထက်မှာ ဖော်ပြထားသလိုပါပဲ။ အချစ်နဲ့ အလုပ်ကို ခွဲခြားနိုင်ပြီဆိုရင် ဘဝရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတိုင်းမှာ အကျိုးရှိပြီး အောင်မြင်မှာပါ။
ရုံးတစ်ခုတည်းမှာ သင့်ချစ်သူနဲ့ အလုပ်အတူတူ လုပ်ရတာ ဘယ်လောက်တောင် ပျော်စရာကောင်းလဲနော်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခု သတိထားရမှာက အဲဒီအကြောင်းကို တစ်လောကလုံး သိအောင် ကြွားစရာ မလိုပါဘူး။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်နေဖို့ပဲ လိုတာပါ။ နောက်ကွယ်မှာ ကဲ့ရဲ့တတ်သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
4. အလုပ်သဘောအရသာ ဆက်ဆံပါ။
ရုံးရောက်ရင် သင်တို့နှစ်ယောက်ဟာ သာမန် ခင်မင်သလိုပဲ ဆက်ဆံရင် သင့်အတွက်လည်း ကောင်းသလို သင့်ချစ်သူအတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။ ပိုပြီးတော့လည်း ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းပါတယ်။
5. လမ်းခွဲဖြစ်ရင်တောင် အလုပ်သဘောအရ ဆက်ဆံဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
သင်တို့နှစ်ယောက် လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ အခါ သူ့ကိုမုန်းနေရင်တောင် တတ်နိုင်သမျှ လူကြီးကောင်းကောင်း ဆက်ဆံပြီး သဘောထားကြီး ပေးလိုက်ပါ။ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ရုံးမှာ သင်လည်း အရေးပါသလို သူလည်း အရေးပါ ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မစွက်ဘဲ အလုပ်သဘောအရပဲ ဆက်ဆံမယ် ဆိုရင် နှစ်ယောက်လုံးအတွက် ကောင်းပါတယ်။